Isitudiyo kwiNtlambo yaseBelbo
ICasa del Lupo liphupha lethu libe yinyaniso! ngo-2011 sathandana nommandla waseLanghe kwaye ngoku sinendawo yethu apha ekupheleni kwehlathi, sinezitudiyo ezimbini ezinamakhitshi abucala kunye nezindlu zokuhlambela. Indlu ibuyiselwe ngononophelo ngentlonipho enkulu yolwakhiwo lwangaphambili kodwa ngentuthuzelo engqondweni! Indawo engqongileyo ibonelela ngeendlela ezininzi zokukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukungcamla ukutya, ukwenza iyoga njalo njalo. Ukusuka apha unokwenza uhambo lwemini ukuya elunxwemeni, iAlps, umlambo okanye iindawo zokuchithela i-ski.
Indawo yewayini yaseBarolo, unxweme lwaseLigurian kunye neAlps eneendawo zokuchithela iiholide zeSki zonke zikwiyure enye yokuqhuba. Indawo engqonge ngokuthe ngqo iyaziwa ngendalo entle, iilali ezintle kunye neendawo zokutyela ezinkulu ngaphandle kokhenketho oluninzi.
Indawo yethu imi kanye ngaphandle kwelali encinci ebonelela ngazo zonke iimfuno ezisisiseko (ivenkile enkulu encinci, ikhefi, ibhanki, ikhemesti, intengiso yemifuno kanye ngeveki) kodwa ijikelezwe yindalo kuphela. Ihlathi, umlambo kunye nembono zidala ukuzola okukhulu.
Siyakonwabela kakhulu ukunxulumana kodwa akuyomfuneko kwaphela. Konke kuxhomekeke kwiminqweno yakho! Zive ukhululekile ukusicela kuphela ingcebiso kuyo nantoni na okanye ujoyine kwitafile yethu xa ifanele thina sobabini!